Imigca Instagram: Generator, Imiqondiso, Emoji, Online Khuphela Ne Cola
Kwisayithi yethu web uya kufumana ezininzi migca mitsha eza kusetyenziswa Instagram. Kukho ukhetho olubanzi semigca for Instagram. Ngaphandle iifonti kwezisezantsi, uzakujikelezisa nayiphi bomgca elihle Instagram kukhetho lwakho. Naziphi na imibhalo kunye neetekisi wadala apha lwaza ifakiwe na umgca profile yakho Instagram, kungakhathaliseki ukuba igama lomsebenzisi okanye isimo sakho, kwesihloko yabucala okanye amabali, ngeposi okanye izimvo. Ngapha koko, iifonti ezahlukeneyo ingasetyenziswa kwi web site: umgca, obukhulu, kekeleyo okanye krwela.
Indlela adale font elihle
Ukuze ukusebenzisa nayiphi bomgca zimelwe kwi web site kwiprofayile yakho Instagram, kuya kufuneka ukuchwetheza okubhaliweyo efunekayo kwi window site ekhethekileyo kwaye khetha nasiphi ifonti oyithandileyo. Emva koko uya kuba nako ukukhuphela iindidi zetekisi ngoonobumba ezintle ukusuka kwisiza. Ngenxa eli cebo uya kukwazi ukongeza iifonti ezintsha Instagram wakho uze uyile iprofayile yakho kuphela. Ukusebenzisa site yethu web uyakwazi ukutshintsha bamagama kwi Instagram zombini kwisihloko yabucala kunye nezithuba okanye izimvo zakho.
Kwihlabathi mihla kuya kufuneka kwiimpawu ezithile ukuze wenze izithuba zakho ekhethekileyo ngokwenene ngoxa blogging e Instagram. Ngaphandle iindidi ezahlukeneyo zetekisi, uya kufumana uluhlu olukhulu kwakufanelekile iisimboli for Instagram. Ngokomzekelo, ukusuka apha uya kukwazi ukuba bakope isimboli uphawu ngenxa Instagram lomsebenzisi. Uza kukwazi ukuba ukukhuphela nayiphi na imiqondiso for Instagram ukuba ngaba ungathanda ukufaka kwiprofayile yakho kwisayithi yethu web.
Ukuze ukucwangcisa isiqulatho yakho ngexesha blogging e Instagram kufuneka omaziyo zingasetyenziswa zingaphi imiqondiso ngexesha ubhala isithuba Instagram, ngokuzalisa ngegama okanye kwiprofayili kwesihloko. Ngoko ke, zingaphi iisimboli ntoni isithuba Instagram na?
Instagram kuyinto inethiwekhi social ngakumbi iifoto ngaphezu kwiitekisi; Ngoko ke, umthamo sithuba kuphela. Umda kukuba symbols 2.200 kwisithuba ngasinye. Nokuba zingaphi iisimboli kuquka sihloko iprofayili? Kuya kufuneka ukuba ilingane ingcaciso efunekayo ngeeMpawu 150 ukuze bongeze inkcazelo yakho sihloko iprofayili. Amazwana Instagram babe umda uphawu ngokunjalo; uya kuba nako ukubhala izimvo iisimboli elifutshane kwe amabini kunye neempawu ngaphezu 1000.
Unako kwakhona ukudala emojis ezahlukeneyo for Instagram kwisayithi yethu web. Ungadibanisa emojis wadala kwisayithi yethu web kuzo zombini kwizithuba Instagram namabali.
Le sayithi luza kunceda ekulungiseni wokudala lwakho ezingaqhelekanga for Instagram. Ungafumana indibaniselwano ebusweni elikhulu inkcazo iprofayili. Indlela ukongeza lwakho kwisithuba okanye amabali kuyafana yasetyenziselwa kwizicatshulwa emojis: i-emoticon kufuneka zongezwe kwi web site kunye baxhoma kwi Instagram.
Ingcamango zokusebenza web site isekelwe ekudalweni iintlobo ezahlukeneyo usebenzisa iisimboli Unicode ezahlukeneyo. Ngoko Nngokobuchwepheshe site yethu web akudali iifonti, kodwa idibanisa glyphs Unicode ehambelanayo ne Instagram. Yintoni Unicode Instagram?
Lonke ulwazi ngekhompyutha lugcinwe kwifomati yokubini (imidibaniso ezahlukeneyo amaqanda abo). Nkqu okubhaliweyo othe wena okwangoku nokufunda igcinwa kwi umncedisi njengoko amaqanda kunye nabo. Ekuqaleni kwexesha computer umenzi ngamnye izimvo zabo malunga ikhowudi yokubini ukuba zisetyenziswe ukwenzela ukubonisa zemiyalezo ezahlukeneyo.
Ngo-1980 i-code yokubini iye mgangathweni ngenxa Unicode. Unicode i igunya emgangathweni ngamazwe ukusebenza iinkcukacha iphela zemiyalezo.
Phambi Unicode wabonakala, yonke wenkqubo kusetyenziswa iindlela zabo yokugcina kunye nokunikeza umbhalo; Ngoko ke, ngalo lonke ixesha xa iinkqubo ezimbini adalwe badwelisi benkqubo ezahlukeneyo kwafuneka babambisane, le «umguquleli» bekumele senziwe.
Ngenxa yokuba lenguqu ukuya umgangatho ngokubanzi wawunzima kakhulu kwaye hayi zonke iinkampani wayefuna transit kwinkqubo ohlangeneyo uphawu itekisi ikhowudi, Unicode kwafuneka ukusebenzisa iseti yeesimboli ezahlukeneyo ukuxhasa iinkqubo, kuquka kuphelelwa. Kungekudala inani yeesimboli lakhula ngesantya bomtya, kwaye kungoku ke amakhulu amawaka. Ezi lwakho imifanekiso iteksti kwakunye; Ngoko ke, bonke lwakho evelayo yonke imihla kudlule Unicode ngokunjalo.
I-128 iisimboli Unicode zokuqala iisimboli ASCII ezo alphabet Latin. Kodwa Unicode iqulathe okuninzi ngaphezu iisimboli 128 yaye abaninzi kubo zifana abalinganiswa Latin, kodwa kufuneka iiyantlukwano malunga ileta nenkalipho okanye iipateni. Ezi mpawu zingasetyenziswa ukwenza «pseudoalphabets» efana abaqhelekileyo ungachwetheza nje kodwa ukuba iiyantlukwano ezithile: nesibindi ngakumbi, ebhalwe akekeleyo, zocaphulo okanye umgca!
I «Font» gama lithetha iseti yemizobo ohambelana glyphs ezahlukeneyo okanye ezinye Unicode. Umele ukuba weva malunga Sans Comic kunye Arial, ezo lwamagama. Izinto eyenziwe kwiziko lethu lewebhu xa kudalwa iitekisi, emojis okanye lwakho, kwakunye neenkcukacha ukuba ukhuphela kwaye cola, lo gama usebenzisa i site web, kuba eneneni imiqondiso zikhoyo ifonti nganye. Ngoko ke, umbhalo bukekela kunye nezinye iincwadi ezineenkcukacha ukuba ukudala ukusisebenzisa kwiprofayile yakho Instagram ngokwenene imiqondiso ezahlukeneyo, ezifana neeleta A no-B, umzekelo.
Ngoko ke, kutheni le migca ezikhethekileyo kwisayithi yethu web olufunekayo? Ukuba zazikhe eziqhelekileyo zimelwe apha, akuyi kuba nako ekukhupheleni izincamathisele! Ngokomzekelo, uya kuze ube nako ukufaka amanye amagama Comic Sans zibe bio yakho Instagram, ngokuba iisimboli ukhuphela uya kuba iisimboli ASCII eziqhelekileyo kwaye ziza kuboniswa kule kumanxuwa athile njengoko kumiselwe ngumnini site.
Noko ke, lo gama usebenzisa iseti yeesimboli Unicode ekhangeleka nefonti ethile okanye yesimbo ethile (obukhulu, kekeleyo, umgca okanye zocaphulo, umzekelo), siya kuba nako ukusebenzisa iitekisi ezifana ukuya «xelisani» ifonti ezintle iprofayile kwesihloko okanye kwizithuba yakho Instagram.